လက်မထပ်မှ နှင့် လက်ထပ်ပြီးကာလ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » လက်မထပ်မှ နှင့် လက်ထပ်ပြီးကာလ
လက်မထပ်မှ နှင့် လက်ထပ်ပြီးကာလ
Posted by Good Idea on Dec 2, 2010 in Relationships & Family |6comments
သူသည် အလွန် လွမ်းမိုးမှု အားကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် အတွက် သူမက သူ.ကို
ရွေးချယ်လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ သို.သော် နောက်ပိုင်းတွင် သူမသည် ထိုလူ နှင့် လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုလူသည် အရာရာကို လွမ်းမိုးချုပ်ကိုင်တတ်သူတစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ။
သူသည် သူမကို သနားစရာကောင်းလွန်းသည့် အတွက် အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် လက်ထပ်ခဲ့ပါသည် ။ သို.သော် နောက်ပိုင်းတွင် အကူအညီမရ ၊ အစစအရာရာ အားနည်းသည်ဟုပြောပြီး
သူမ သည် သူ.ကို လက်ထပ်ခဲ့ပါသည် ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူသည် အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ကောင်းစွာ ရပ်တည် နိုင်ဖို. အတွက် ၀င်ငွေအပြည့်အ၀ရအောင် ရှာနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ။ နောက်ပိုင်းတွင် သူမသည် ထိုလူ နှင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ပါသည် ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုလူသည် ၀င်ငွေရရေး သူ.အလုပ်မှလွဲလို.
ဘာမှစိတ်မ၀င်စားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အကြောင်းပြခဲ့ပါသည် ။
သူသည် သူမကို လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် သူမသည် သူ၏ မိခင်ကို သတိရစေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ။သို.သော် နောက်ပိုင်းတွင် ကွာရှင်းခဲ့ပါသည် ။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်
သူမသည် နောက်ပိုင်းတွင် သူ.မိခင်နှင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိုတူလာ သောကြောင့်ဟု အကြောင်းပြခဲ့ပါသည်။
သူမသည် သူ.ကို လက်ထပ်ခဲ့ပါသည် ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ကြော့ကြော့လေး နေတတ်ပြီး ချစ်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည် ။နောက်ပိုင်းတွင် သူမသည် ထိုလူ နှင့်ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ပေ့ါပေါ့နေပြီး အချစ် စိတ်ကူးယဉ်လွန်းသောကြောင့်ဟု အကြောင်းပြပါသည် ။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူမ နှင့်နေရသည်မှာ ပျင်းစရာ ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အကြောင်းပြခဲ့ပါသည် ။
(ဘယ်သူရေးသလဲတော့ မသိဘူးဗျ။ ကျနော့် မေးလ်ထဲရောက်လာလို့ စဉ်းစားစရာလေးတွေလည်း ပါနေလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သိတဲ့မိတ်ဆွေများ ပြောပြပေးကြပါ။)
ပို့စ်လေး ကဂွတ်တယ်ဗျို့။ လူတွေရဲ့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောထားတွေပေါ့ အထူးသဖြင့်ယောကျာင်္လေးတွေပေါ့။
လောကမှာ ဘာနဲ့ တူလို့ ချစ်တာ .. ဘယ်သူနဲ့ တူလို့ ချစ်တာ ဆိုတဲ့ .. အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို အခြေခံလိုက်ရင် .. အဲဒီ အခြေခံ အချက် ပျက်သွားတာနဲ့ ချစ်တာ ပျက်သွားတတ်ကြတယ် ..
ဒါပေမယ့် .. အမေက ပြောဘူးတယ် .. ကိုယ် တည်ဆောက်တဲ့ အိမ် မပျက်စေချင်ရင် .. အစကတည်းက အသေအချာ စဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါတဲ့ ..
တချို့ကတော့ ပြောကြတယ် .. မကောင်းတာကို ဘာလို့ ဖက်တွယ်နေမှာလဲ တဲ့ ..
ဒါပေမယ့် .. ကိုယ်တည်ဆောက်တဲ့ ဘ၀က ကိုယ်တိုင် ဖျက်မယ် ဆိုရင် .. အဲဒီဘ၀ရဲ့ အဆွယ်အပွားတွေကို ပြန်ကြည့်ဖို့ လိုမယ် ထင်တယ် .. ဒါကို မစဉ်းစားတဲ့လူတိုင်း .. စေ့စပ်လက်ထပ်ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးစီးခြင်း ဆိုတာ ဖြစ်သွားကြမှာပါ ..
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲ လက်ထပ်ပါစေ.. အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တော့လို့ ကွဲမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့လေးတွေကတော့ သနားဖို့ကောင်းပါတယ်…..
မြွေဟောက်ရယ် .. တော်တော်ကြာ .. ကွာရှင်းတဲ့ အဆင့်မရောက်ခင် ကိုကျော်သူနဲ့ တွေ့နေပါဦးမယ်
အဲဒီအပေါ်က အရုပ်နဲ့စာကို ဖတ်ကြည့်ပေါ့..။
ပြောရရင် ..အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်က အချက်အလက်နဲ့ စာလေးတွေကို …ဗမာလိုပြန်ပြီး … မြန်မာတွေနဲ့ကိုက်အောင်ဆောင်းပါးလေးလုပ်နိုင်ရင် ..တော်တော်ကောင်းမယ်ထင်မိတာပဲ..။